mpahaitoetra malagasy hanampy ny fitsaboana ireo maran’izay aretina Coronavirus izay. Isan’ny sokajiana ho mpitsabo rahateo izy ireny ary heverina fa isan’ny ilaina hanampy amin’ny lafiny tohana ara-tsaina ho an’ireo marary. Raha ny vaovao voaray dia nisy tamin’izy ireo no nalefa teny amin’ny hopitaly manara-penitra eny Andohatapenaka eny. Heverina fa tsy ho ambakan’izany koa ireo toeran-kafa handraisana ireo marary rehetra. Ho an’Anosiala moa dia ny ekipan’ny mpahaitoetra avy ao amin’ny ONPM no nalefa hiasa eny.